प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदको दुई तिहाइप्राप्त छ । त्यसैले उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ । तर संसदमा दुई तिहाइ भएको प्रधानमन्त्रीको आफ्नै पार्टीमा भने दुई तिहाइ छ जस्तो लाग्दैन । कहिलेकाहीं त यस्तो लाग्छ कि पार्टीमा उहाँसँग दुई तिहाइ होइन दुई मात्र छ । एक, उहाँ आफै । अर्को, पृष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । अलि–अलि भूपू र वर्तमान महासचिव बाँकी सबै अर्कैतिर । पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू माधव… विस्तृत समाचार
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा कुनै बेला औंलाभरि औंठी लगाउने नेताको रुपमा चिनिनुहुन्थ्यो । यसपटक के भएछ कुन्नि, उहाँका औंलाहरूमा त्यतिविधि औंठी देखिए । देखिन्न के, एउटै पनि औंठी लगाएको पाइएन । देउवाको हातमा औंठी नदेखेपछि आश्चर्य लाग्यो । अब उहाँले औँठी किन लगाउनु भएन ? कुनचाहिँ ज्योतिषले भनेका कारण लगाउनु भएन ? कांग्रेस सरकारबाट हटेको कारण औंठी नलगाउनु भएको हो कि औंठी नलगाएको कारण कांग्रेस… विस्तृत समाचार
सरकारले आफ्ना निर्णय गोप्य नै राख्ने निर्णय गरेको रहेछ । अब मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय पहिलेजस्तो खुरुखुरु जनतासामु आउने छैन । त्यो या त गोप्य नै हुनेछ, या त विस्तारै सार्वजनिक हुनेछ । अब जनताले सोध्लान्, किन गोप्य ? सरकारको निर्णयबारे जानकारी पाउने त जनताको अधिकार हो । तर हेर्नोस्, यो त दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हो । यस्तो सरकारमा कहाँ पहिलेजस्तो निर्णय सार्वजनिक हुन्छ र ।… विस्तृत समाचार
विराटनगरमा भ्यू टावर बन्ने खबरले विराटनगर महानगरपालिका खुसी छ । किनभने यो भ्यू टावर महानगरपालिका आफ्नै पहलमा बन्न लागेको हो । भ्यू टावर बन्न लागेकोमा महानगरवासी भने त्यति खुसी भएको रहेनछन् । धेरैले त्यसबारे गुनासो गरेको पाइयो । कसैले यसो पनि भने, महानगरमा गर्नुपर्ने काम अरू धेरै छन् तर महानगरपालिका त्यो सबैलाई छोडेर भ्यू टावर बनाउनतिर लागेको छ । के महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने त्यति धेरै काम… विस्तृत समाचार
विजय गच्छदारले फेरि बाजी मारे । रामचन्द्र पौडेल कराएको करायै हुनुहुन्छ, गच्छदारचाहिँ उपसभापति भइछाडे । कांग्रेस छोडेर फोरम, फोरम फोडेर अर्को फोरम, पछि त्यो फोरम पनि छोडेर पुनः कांग्रेस । र, कांग्रेसमा पनि उपसभापति । यो हो नि त राजनीति भनेको । राजनीति त रामचन्द्र पौडेलले विजय गच्छदारबाटै सिकुन् । गच्छदार पार्टीको उपसभापति बनेपछि कांग्रेसमा पुनः रडाको मच्चिएको छ । तर, यस्तो रडाकोले पार्टीलाई कुनै… विस्तृत समाचार
अब नेपाललाई चीनले पनि बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिने भएको छ । यसअघि भारतले मात्रै प्रयोग गर्न दिइरहेको थियो । अब चीन पनि थपिएपछि भारतसँग मात्र निर्भर रहनु परेन । चिनियाँ बन्दरगाह पनि चलाउन पाइने भएपछि अब चिनियाँ भूमिबाट पनि सामान ल्याउन पाइने भयो । उता, भारतीय बन्दरगाहबाट सामान त ल्याइरहेकै थियौँ । भारतको दुइटा बन्दरगाहबाट सामान ल्याउने गथ्र्याैं । अब चीनको ६ वटा बन्दरगाहबाट पनि… विस्तृत समाचार
कञ्चनपुरको निर्मला पन्त काण्ड सल्किँदै गएर अब देशबाहिरसमेत पुगिसकेको छ । अस्ति ‘अपराधीलाई कारबाही गर’ भन्दै अस्ट्रेलियामा ¥याली निस्केछ । भोलि अपराधीलाई कारबाही गर भन्दै ह्वाइट हाउस अगाडि ¥याली निस्कियो । पर्सि राष्ट्रसंघअगाडि ¥याली आइदेला । निर्मला हत्या प्रकरणमा उठिरहेको एउटै माग हो–अपराधीलाई कारबाही गर । वास्तवमा यो काण्डमा कारबाही नै नगरिएको त होइन । कारबाही त भइरहेकै छ नि ! प्रहरीले प्रहरीलाई नै कारबाही… विस्तृत समाचार
राजनीतिमा अहिले अरिंगाल घुसेको छ । त्यसैले जहाँ गए पनि अरिंगालकै भुइँयाऽ आवाज मात्रै सुनिन्छ । अरू सुनिँदैन । अरिंगाल उसै पनि डरलाग्दो कीरा हो । त्यसमाथि राजनीति लागेपछि यसको डरलाग्दोपन पनि दोहोरो अंकले वृद्धि भएको छ । त्यसो त नेपाली राजनीतिमा अहिले मानिसभन्दा पनि जीवजन्तुकै बाहुल्यता छ । नेपाली राजनीति कुनै मानिसले चलाएजस्तो देखिँदैन । त्यो कुनै जीवजन्तुद्वारा नै सञ्चालित देखिन्छ । नेपाली राजनीतिमा… विस्तृत समाचार
कांग्रेस सांसदहरू अहिले संसद अवरोध कार्यमा लागेका छन् । अरू लाग्ने काम नभए पछि संसद अवरोध नै मुख्य कार्य हुन गएको छ । भन्न त यो संसद अवरोध सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न गरिएको भनिएको छ । तर, यसले यथार्थमा अप्ठेरो भने सभापनि शेरबहाद्ुर देउवालाई पो पार्ने हो कि भन्ने शंका छ । किनभने संसद्मा अवरोध पार्ने काम शेरबहादुरप्रति चलाइएको विरोधलाई दबाउन काम हो भन्ने पनि प्रष्ट… विस्तृत समाचार
विश्वकपको एकमहिने हंगामा सकियो । अब फेरि सरकारलाई टेन्सन सुरु हुने भयो । जेनतेन एक महिना सर्वसाधारणको ध्यान विश्वकपमा केन्द्रित भइरहेको थियो । फुटबलबाहेक अरू कतै कसैको ध्यान थिएन । रातभरि फुटबल हे¥यो, दिनभरि सुत्यो । बस् । दुनियाँमा जेसुकै होस् कसैलाई वास्ता नो । यो अवधिभरि काठमाडौंमा फोहोर उठेन । तर, कसैलाई बाल मतलब भएन । बल भएपछि बाल किन चाहियो ? ठाउँठाउँमा फोहोर… विस्तृत समाचार